Nyaya Iri Kupomerwa VaMaguwu Inopinda Mudare
Chikumi 08, 2010
Mutungamiri wesangano reCentre for Research and Development, VaFarai Maguwu, avo vakasungwa neChina svondo rapfuura kwaMutare, vamiswa mudare redzimhosva mu Harare neChipiri vachipomerwa mhosva yokuburitsa manyepo anoipisa chimiro chehurumende.
Muchuchisi wehurumende panyaya iyi, Amai Phyllis Zvenyika, vaudza dare kuti VaMaguwu vakatyora mutemo we criminal law codification and reforms act kubudikidza nemashoko avati aizokanganisa chimiro chehurumende.
Amai Zvenyika vati mapurisa akatambira mashoko ekuti Va Maguwu vakanyora magwaro akawanda ane mashoko emanyepo ane chokuita nekufa, kukuvara pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vanochera mangoda kwaChiadzwa. Vati izvi ndizvo zvakakoknzera kuti mapurisa azonosecha kumba kwavo pamwe nekuhofisi kwavo, uko kunonzi kwakawanikwa magwaro aya.
Amai Zvenyika vati magwaro aya aive nemazita pamwe nehuwandu hwevanhu vanonzi vakatyorerwa kodzero dzavo nemapurisa pamwe nemasoja kwaChiadzwa.
Vatiwo VaMaguwu vakawnikwa vaine tsambambozha yaibva kune vanzi vanonzi Va Tor-Hugne Olsen ichienda kwavari uye yakakoperwa kune mumwe munhu anonzi Va Gabriel Shumba yaitaura nezvinonzi zvakaitika kwaChiadzwa.
Rimwe reamgweta matatu ari kumirira VaMaguwu, VaTinoziva Bere, vaudza dare kuti Va Maguwu vainyimwa zvokudya pamwe nemukana wekuwona vana chiremba zvichitevera kurwara kwavakaita vari muhusungwa.
Mutongi wedare, Va Donald Ndirowei, vaudza Amai Zvenyika kuti vaferefete kutyorwa kwekodzero dzaVa Maguwu uku.
Rimwe remagweta aVa Maguwu, Va Trust Maanda, vabva vasvitsa chikumbiro kudare chokuti nyaya iri kupomerwa VaMaguwu iraswe vachiti hapana humbowo hwaunzwa kudare hunoratidza kuti Va Maguwu vane mhosva yavakapara.
Va Maanda vati Va Maguwu vanofanira kuburitswa muhusungwa, mapurisa ozoenderera mberi nemasamanisi kana ane zvimwe zvaanezenge achida. Vati chikonzero ndechekuti pane imwe nyaya iri kudare repamusorosoro re Supreme Court yakakwidzwa nevatori nenhau vekuZimbabwe Independent vanoti Vincent Kahiya naConstantine Chimakure yavaigunun'una kuti kodzero dzavo dzakatyorwa pavakapomerwa mhosva yokutyora chikamu chemutemo chimwecho chiri kunzi Va Maguwu vakatyorawo. Va Maanda vati Va Maguwu vari kuchemawo zvimwe chetezvo, nokudaro vati vaona zvakakodzera kuti vasape Supreme Court mutoro wekutonga imwe nyaya yakangofanana neyakakwidzwa nevatori venhau vekuZimbabwe Independent ava.
VaMaanda vati hurumende inofanira kugutsa dare kuti Va Maguwu vakashambadza mashoko aya papi uye inofanira kutaura kuti hupfumi hwenyika pamwe nechimiro chehurumende zvaizokanganisika papi, kwete kuti ingoita zvefungidziro
Mumapepa awunzwa kudare nemapurisa, VaMaguwu vanonzi vakabvuma kuti magwaro aya aive avo. Asi VaMaanda vati VaMaguwu havabvume zviri kutaurwa nemapurisa.
Vachibatsirana naVa Maanda, Va Bere vatiwo panenge pave kushandiswa zvematongerwo enyika panyaya iyi sezvo mugwaro raVa Sostein Dhowa, vanove mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, richiti VaMaguwu vanorarama nekuburitsa mashoko anosvibisa nyika.
VaBere vati mumitemo yeZimbabwe hamuna chikamu chakadaro uye vati hunyanzvi hwaVaDhowa semupurisa, hunofanira kuferefetwa.
Muchuchisi wenyaya iyi ati haana kugadzirira kuti ape divi rehurumende, izvo zvakakonzera kuti magweta aVaMaguwu amanikidze hurumende kupa mhinduro ipapo. Asi mutongi wedare atura mutongo wekuti hurumende imbopihwa nguva yokugadzirira mhinduro yayo.
Nyaya iyi ichaenderera mberi neChitatu. Izvi zvinoreva kuti Va Maguwu vachadzokera mumawoko emapurisa zvakare kusvika neChitatu.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, VaNdirowei vati vachapa mutongo wavo neChina pachikumbiro chakaitwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri we MDC 99, Va Job Sikhala, avo vari kupomerwa mhosva yekuita musangano vasina mvumo yemapurisa, chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe.
Ukuwo sangano reCrisis In Zimbabwe rinoti sangano reKimberly Process rinofanirwa kuferefeta kusungwa kwaVaMaguwu.
Sachigaro wesangano iri, VaJonah Gokova, vati zvakaitika pakati penhumwa yeKimberly Process kuZimbabwe, VaAbbey Chikane, naVaMaguwu zvinofanirwa kuferefetwa.
Ukuwo Kimberly Process yaburitsa gwaro rinoti Zimbabwe iri kutevedza zvose zvinodiwa pakuchera pamwe nekutengeswa kwemangoda.
Sangano iri rakange rapa nguva yekuti igadzirise zvose zvinodiwa Chikumi asati asvika. Asi masangano akaita seHuman Rights Watch anoti kodzero dzevanhu dziciri kutyorwa kwaChiadzwa, uye huori huchiri kuenderera mberi munzvimbo yanetsa nemangoda.